सिनेमा | bageshworipost.com
Home मनोरञ्जन+ सिनेमा
नेपालगन्ज । बलिउडमा नायक सैफअली खानको चर्चा ‘रेश’ नामक चलचित्रका कारण पनि भयो । अब्बास मस्तानको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘रेश १ र २’मा सैफ नै मुख्य भूमिकामा थिए । तर, अब ‘रेश ३’ पनि बन्न... Read more
प्रेम, रोमान्स र एक्सनसहित सार्वजनिक भयो ‘प्रेम गीत २’ को ट्रेलर
नेपालगन्ज । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रतिक्षित बनेको चलचित्र ‘प्रेम गीत २’ को ट्रेलर सार्वजानिक भएको छ। काठमाडौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फिल्मको ट्रेलर सार्वजानिक गरिएको हो। सा... Read more
‘बाहुबली २’ ले तोड्यो सबै रेकर्ड, पहिलो दिनमै गर्यो यस्तो कमाइ
नेपालगन्ज । भारतीय फिल्ममध्ये ‘बाहुबली–२’ले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । फिल्मले रिलिज भएको पहिलो दिनमा सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने रेकर्ड राखेको हो । यसभन्दा पहिले शाहरुख खान अभिनित ‘रइश’ले रिलिज... Read more
सोलुखुम्बु । समुद्री सतहबाट दुईहजार ७०० मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको सोलुखुम्बुको पत्ताले डाँडा चलचित्र तथा म्युजिक भिडियो छायाँङकनका लागि पनि राम्रो मान्न थालिएको छ । मौसम खुलेको बेलामा चि... Read more
नेपालगन्ज । नेपालमा त्यति धेरै सस्पेन्स थ्रिलर चलचित्र बन्दैनन् । बनेका चलचित्र सस्पेन्स भनिएपनि तिनमा रहस्य नै हुँदैन । सारै झुर हुन्छन् । चलचित्र ‘लूट’ सस्पेन्स चलचित्रको थिममा बनेको एउटा... Read more
बिहे नै भएको छैन, डिभोर्सको के कुरा? : गिरी
नेपालगन्ज । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ को सफलतापछि हौसिएको टिमले यही शीर्षकको अर्को चलचित्र ‘छक्का पञ्जा फेरि’ निर्माण गरेपछि नै मिडियामा स्थान पाएको थियो । पहिलो सिक्वेल हिट भएकाले पनि यसको दोस्... Read more
आक्रामक रुपमा आएको लुट–२ ले कमाउन सकेन, लुट–३ बनाउने तयारी
नेपालगन्ज । चलचित्र ‘लूट २’ ले अहिलेसम्म ७ करोड ८५ लाखको कलेक्सन गरेको छ । आक्रामक रुपमा हलमा आएको चलचित्रले भने सोचे अनुसारको व्यापार गर्न सकेको छैन । चलचित्र ‘लूट’ ले ४ करोड कमाएको थियो ।... Read more
कलाकारिता र नर्सिङ पेशालाई साथसाथै लैजान्छु : रेश्मा
नेपालगन्ज । विराटनगरको गर्मीले उनलाई थोरै कालो बनाएको छ । तर धेरै काली पनि देखिन्नन् उनी । गमक्क परेको उनको आभाले धेरैको ध्यान खिच्छ । आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘यो साइनो मायाको’ को प्रमोसनका लागि... Read more
‘लिपिस्टिक अण्डर माई बुर्का’लाई भारतीय सेन्सरले लगायो प्रतिबन्ध, आखिर किन ?
नेपालगन्ज,२१ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितिसकेको भारतीय चलचित्र ‘लिपिस्टिक अण्डर माइ बुर्का’ भारतमा रिलिजका लागि सेन्सरसँग जुधिरहेको छ । निर्देशक अलंकृता श्रीवास्वलाई हालै एक त्रुटीपूर्... Read more
यी सुन्दरीले कसरी कमाइन् सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर लाखौं डलर ?
नेपालगन्ज,२१ फागुन । ग्राबियल्ली इपिस्टिन अहिले २१ वर्षकी छिन् । उनी सामाजिक सञ्जाल इस्टाग्राममा चलेकी मोडल हुन् । विभिन्न सामाग्रीहरुका विज्ञापनमा समेत उनी छाउँछिन् । तर उनलाई स्टेज शो तथा... Read more